Global Voices teny Malagasy » Tatitra COVID-19 ataon’ny media frantsay: tsinontsinoaviny ireo manampahaizana manokana avy amin’ny vitsy an’isa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Septambra 2020 13:43 GMT 1	 · Mpanoratra Eric Tevoedjre Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Benin, Frantsa, Foko sy Fiaviana, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, COVID-19, Ny Tetezana - The Bridge
Ankizilahy iray manao arontava eny an-tratran-drainy. Saripika an'i Xavier Donat  tao amin'ny Flickr, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 2.5 .
Dimy ambinifolo taona lasa izay, nisy boky iray be mpividy indrindra nosoratan'ilay mpahay fiarahamonina, Eric Maurin, Le Ghetto Français , nanoritsoritra ireo dingana tomponandraikitra amin'ny fanavakavahana ara-tsôsialy sy jeôgrafika mampiavaka ny fiarahamonina frantsay.
Avy hatrany, ireo fantsom-pahitalavitra goavana dia nanomboka nikarakara adihevitra lavabe niarahana tamin'ireo mpitsabo, mpikaroka sy ireo manampahaizana manokana amin'ny fahasalamam-bahoaka avy amin'ireo hôpitaly, fianarana na labaoratoara malaza ao Frantsa, Soisa ary Etazonia. An-tapitrisa maro ireo olompirenena no nihazona ny fofonainy nandritra ny nampitan'ireny manampahaizana manokana ireny , saika isanandro vaky, ireo tarehimarika fototra mety hampitonitony ny tahotr'izy ireo sy mety hanavotra aina maro.
Fifandrifian-javatra, tao anatin'ny tatitra fanaony isantaona momba ny ady fanoherana ny fanavakavahana, ny fankahalàna Jiosy ary ny Fankahalàna vahiny  [pdf], ny Filankevipirenena Fakàn-kevitra momba ny Zon'Olombelona (CNDH), dia nanolotra ireo tohevitra goavana avy aminy ho an'ity taona 2020 ity:
Tamin'ny 2013, nisy fanadihadiana iray  notontosain'i Catherine Ghosn nampitahàny ny fanehoana ireo vitsy an'isa teny anaty fahitalavitra amerikàna, belza, britanika, kanadiàna ary frantsay. Voamarik'io mpikaroka momba ny Siansan'ny Fampitambaovao sy ny Fifandraisana io fa ireo politika frantsay amin'io sehatra io dia tsy mahomby sy tsy misy fiantraikany raha oharina amin'ny an'ireo firenena hafa nanaovana ilay fandalinana.
Tamin'ny 2007, ilay mpikaroka, Catherine Humblot,  dia nahatsikaritra fa na nahavita ezaka aza i Frantsa tamin'ny fanehoana ireo vitsy an'isa tao aminy, mbola lavitra ny làlana hodiaviny. Manazava izy, ohatra, fa vao tamin'ny 2006 no nisy fantsom-pahitalavitra frantsay iray goavana nandray fanapahankevitra sahisahy ny hampiseho ilay mainty hoditra mpanao gazety, Harry Roselmack, mandritra ireo ora be mpanaraka indrindra – ary io dia vonjimaika ihany. Raha ampitahaina, tamin'io taona io ihany, araka ny nambaran'ilay Holandey mpanao gazety, Stefan de Vries , nitsahatra handeha hisotro ronono ilay vahivavy mainty hoditra voalohany indindra nitàna toerana mpanolotra vaovao tao amin'ny fahitalavitra holandey.
Mety hoe amin'ny endriny hafa mihitsy ve ny olan'i Frantsa ? Sa mety hoe zara raha misy ireo manampahaizana manokana amin'ny sehatry ny fisaboana no avy amin'ireo vitsy an'isa ao Frantsa ? Tsy voatery ho izay. Tamin'ny 2007, ny gazety mpiseho isanandro ao Frantsa Libération dia nitanisa  tomponandraikitra iray ao amin'ny Firenena Mikambana, Habib Ouane, nihoraka hoe : « Betsaka ny Beninoà mpitsabo, raha tsy hilaza afa-tsy ny ao Ile-de-France monja, raha oharina amin'ny any Benin manontolo! »
Samy efa nandre isika ny tantaran'ilay « voromahery niaina ho toy ny akoho  » [anlg] : rehefa nilatsaka avy eny amin'ny akàny nisy azy, dia nitontona tao anaty toerana fiompiana akoho ny voromahery iray, vetivety be izy dia voaray sy voataizan'ireo zanaka akoho tao. Nitombo izy ary nihevitra hatrany fa akoho. Indray andro izy dia nifanena tamina voromahery iray be taona noho izy, ary io no nampianatra azy nanidina sy nanampy azy hampivoatra ny tena maha-izy azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/09/21/149807/
 35 tapitrisa ny olona : https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2760247-20200414-coronavirus-3379-millions-telespectateurs-devant-emmanuel-macron
 manampahaizana manokana ireny: https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-qui-sont-les-experts-qui-nous-parlent-tous-les-jours-dans-les-medias_4071553.html
 tatitra fanaony isantaona momba ny ady fanoherana ny fanavakavahana, ny fankahalàna Jiosy ary ny Fankahalàna vahiny: https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_racisme_-_v_definitive_08_06_2020.pdf
 Tamin'ny 2013, nisy fanadihadiana iray: https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2013-1-page-51.htm
 Catherine Humblot,: https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-241.htm
 dia nanolotra : https://www.pbs.org/newshour/brief/317622/dr-elizabeth-wayne
 dia nitanisa: https://www.liberation.fr/futurs/2007/07/20/il-y-a-plus-de-medecins-beninois-en-ile-de-france-qu-au-benin_98611#:~:text=%C2%ABUn%20transfert%20inverse%20de%20technologie,d%C3%A9part%2C%20ont%20su%20conserver%20leur
 dia nanoratra hoe : https://thearabweekly.com/arab-african-doctors-saving-french-lives
 voromahery niaina ho toy ny akoho: http://blog.amirkhella.com/2009/11/04/the-eagle-who-lived-as-a-chicken/